Xeelad ku jirta qaabka ay haatan u socoto doorashada Somalia oo la kashifay! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Xeelad ku jirta qaabka ay haatan u socoto doorashada Somalia oo la...
Xeelad ku jirta qaabka ay haatan u socoto doorashada Somalia oo la kashifay!
(Hadalsame) 06 Nof 2021 – Marka laga soo tago cilladaheeda kale ee tirada badan, doorashada dalka ka socotaa waxay qaadan doontaa laba sano.
Weliba laba sano oo ka soo billaabata markii la doortay mudanihii u horreeyay. Kuma darayo muddadii ka horreysay ee heshiiskeeda uun loo xayirnaa.
Waan ka quustay in aan ka quusto Soomaaliya.
Previous articleDhadhaab-cireed usoo dil-dilloomaya dhanka dhulka & arrin uu Qur’aanku horay u sheegay oo ay NASA hadda baaris ku waddo!
Next articleRW Ciraaq oo ka badbaadey isku dayga khaarajin nooc cusub ah & cidda ay is hayaan + Sababta?!